Omenala Downlock Sold Laash, ụlọ ọrụ nkịta na leash | QQPets
Ebumnuche anyị bụ "ezigbo mma maka nlanarị, ezi okwukwe maka mmepe, na-eji teknụzụ ọhụụ iji melite ogo ngwaahịa".
Isi Ngwaahịa: Kachasị mma nkịta laash, olu akwa nkịta, nkịta na-eme ya na karama nkịta.
Udiri eji eme obodo
A na-ewepụta nkịta azụ (ya na Ìhè)Ọfụma ọkụ na-enwu enwu maka visibil kachasị n'ọchịchịrị, na-eme ka nchekwa abalị.Were nlekọta kachasị mma maka anụ ụlọ gị. Mee ka nkịta gị hụrụ n'anya.Guangzhou ụlọ ahịa na-akwụ ụgwọ.
Obere ụgbọ ala Bungeel
Ihe ndị dị nro polyester na ihe dị nro, ọ dị nro ma na-adịgide adịgide. You nwere ike hazie agba na nha.Anyị nwere teknụzụ ụbọchị ọhụụ, akụrụngwa na akụrụngwa ruru ọkọlọtọ EU.Igwe ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri na-adọkpụ ụkwụ nwere ike ime ka nkịta gị bụrụ onye na-echekwa gị mgbe ị na-anya ụgbọala.
Ejiji ahaziri ahazi nke polylester / nkịta na-agba agba agba agba na leash setịpụrụ
Aki olu mara mma nwere ike ime ka nkịta gị lebara anya n'okporo ụzọ njem mbụ. Ọ bụghị naanị na agba kamakwa adịgide. Nwere ike hazie agba kachasị amasị gị na olu akwa na leash. Oa&A na-anabatadm.
Onye ọkachamara polyester sunbim docrars / leashes / Harnesses na-emepụta
A ga-ahazi ụdị nkịta / leashes / Hasness hazie ya n'ụdị ụdị na agbaGuangzhou Pool Ngwaahịa P., LTD.na-emepụta ụdị nkịta niile / leashes / njikota. Poly Pollester Dog Cols / leasas / Haresness dịkwa. Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ
Azụmaahịa dị elu na-ewu ewu, nkịta na-ete akwa bandana scarf- QQPeets anụ ụlọ ahịa
Na agbanyeghị na maka na ị ga - eme saịtị gị ma ọ bụ na-enweghị ike. Onwere onye aka tinye na nke 14 na -me ihe omumu. Agbanyeghị ngwa ngwa Ike na-atọ gị ụtọ ịhụ Ọrụ Ndị Ọrụ na IMEET. Ọ bụrụ na ị ga - aza ajụjụ maka iji cha cha cha cha ma ọ bụ maka ịmịpụta ihe ị ga - eme. Maka ịghazigharị maka UGBTU A na-arụ ọrụ ozi maka ebe a, ọ bụla, ga - aga 24.Guangzhou na-otu - Nọgidenụ na -eyi, Dalang Artani, Guangzhou City, Guangzhou City, China Na-emepụta Aunnana Guangana Guangana Guangana Guangana Guangana Guangana Guangana Guangana Guangan
Nkwekorita nke ndi ozo na-esiri ike na-aga ije
Nkịta na-akwado Nkwado ụcha kachasị amasị gị, ihe, ụkpụrụ na akara, enwere ike ịhazi ọtụtụ ngwa dị iche iche.Anyị nwere nha anọ dabara adaba maka nkịta dị iche iche. Site na akụkụ abụọ nke ntụtụ ndị na-agbanwe agbanwe nwere ike ịgbanwe nha iji hụ na nkasi obi nke nkịta.Ha nwere ike iji ihe eji eme ihe zuru oke.
Ndị na-emepụta ego na-eme ka ndị ọkachamara na-emekọ ọnụ
Ndị na-emepụta ozi QQPets ndị ọkachamara na-eme ka ọ dị nro na-emekọ ihe ọnụ, iji nye ngwaahịa dị mma, anyị na-eme ihe dị mma& Siste mma usoro nke ọma.Ihe omume efu maka gi.Oem / ODM.Guangzhou Pool Ngwaahịa P., LTD.na-emepụta ụdị nkịta niile / leashes / njikota. Poly Pollester Dog Cols / leasas / Haresness dịkwa. Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ
A na-agbazi akwa akwa akwa akwa akwa
Mara mma na vibrant dị elu na-acha odo odo na akwa olu akwa akwa na-esetịpụ.Ụdị dị mfe na-eme ka ngwaahịa na-adịgide adịgide ma dịkwa ọnụ ala.You nwere ike iji ya na ọzụzụ / ije / na-agba / na-agba / na-aga n'ihu / njem.
Ulo ndi okomoko nke dibulae nke nkịta na-acha uhie uhie
QQPeets ahaziri Subulary Doom Skilo-na-emepụta nke sitere na China, ụlọ ọrụ anyị bụ atụmatụ, na-eme nnyocha, maka ndị mmekọ iji nye arụmọrụ dị mma ma na-ejikọ ọnụ maka ụlọ ọrụ.
Consdị nkịta na-eme atụmatụ ị nweta ezigbo ndị na-azụta | QQPets
Okere Streaty Cons comness imepụta onye nrụpụta, nkọwa gbasara nkịta na-eme, usoro omenala na-edepụta site na QQPets. Nweta ase!Dog Dog na-adị elu na-emepụta onye na-eweta ya, QQPeets pụrụ iche na nkịta usoro ọdịnala Hards Hasness setịpụrụ nnukwu ego. Kpọtụrụ anyị!
Nkịta nkịta ọhịa leash
OEM DO LO LO LEASENY Seanes setịpụrụ onye nrụpụta, nkọwa gbasara nkwanye nkịta setịpụrụ site na ngụkọta nkịta na-enye ajụjụ, na-ajụ ajụjụ!Nkịta olu dị elu nke dị elu leare setịpụrụ onye na-eweta ya, QQPets pụrụ iche na nkịta atọrọ, kpọtụrụ anyị!
Nyekwa unu ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma.
Na-enye ngwaahịa dị mma na ngwaahịa ọkachamara maka anụ ụlọ niile.
●1. Ajụjụ:Ndị ahịa na-akọ ụdị ịchọrọ, ihe, nha, na ihe niile ịchọrọ.
●2. Chepụta:Hazie atụmatụ nke gị. Ndị otu imewe ekenye aka na mbido ọrụ iji hụ na ngwaahịa kachasị mma ejikọtara mkpa ndị ahịa.
●3. Njikwa dị mma: Iji nye ngwaahịa dị mma, anyị na-enwe ọrụ dị irè& Siste mma usoro nke ọma.
●4. Mmepụta Mass:Ozugbo emerela nlele maka ihe osise ahụ na usoro nke ụdị, ọrụ, yana ịchọ, mmepụta bụ ọkwa ọzọ.
●5. Anyị nwere ike Hazie njem ụgbọ mmiri maka iwu - ma site na ọrụ mbupu nke anyị, Mbupu ụlọ ọrụ mbupu ma ọ bụ usoro ndị ọzọ.
Guangzhou Pool Ngwaahịa P., LTD.
●Guangzhou na-akwụ ụgwọ ngwaahịa Co., nke dị na Guangzhou obodo, Guangdong ógbè na ahụmịhe na China, a pụrụ iche na ụdị anụ ọhịa dị iche iche na leash , nkịta na-ahụ maka nkịta, leashes nkịta, azụ ụlọ leash, nkịta na-eme, cat catrs na leashes na-emepụta, mmepụta na ire.
●Anyị nwere teknụzụ ụbọchị ọhụụ, akụrụngwa na akụrụngwa na-erute EU Valerd.WE nwere ngalaba nrụpụta ụlọ, ebe obibi nke Silk, na-eme ihe omumu ihe omumu ihe omumu.
●Ụlọ ọrụ anyị bụ atụmatụ, nyocha na mmepe, emepụta na ire ya niile, maka ndị mmekọ ka ọ bụrụ nke ọma maka ụlọ ọrụ dị mma ma na-ejikọ ọnụ ahịa, ezigbo ọrụ na ọnụahịa asọmpi .
●Ebumnuche anyị bụ "ezigbo mma maka nlanarị, ezigbo okwukwe maka mmepe, na-eji teknụzụ ọhụụ iji melite ọbịbịa gị. Azụ ahịa maka gị.
Aha: Lei Haayan
Ekwentị: + 86-13500023678
Kpọtụrụ anyị na mgbasa ozi mmekọrịta